Oasisthetoo: April 2013
By-Soup for Soul (motivational essays
Posted by Oasisthetoo at 8:27 PM No comments: Links to this post
၂၀၁၃ သင်္ကြန် အမှတ်တရ
Posted by Oasisthetoo at 8:17 PM No comments: Links to this post
2013 သင်္ကြန် ပြီး နှစ်ဆန် တစ်ရက်နေ့ စစ်ကိုင်း မင်းကွန်း အမှတ်တရ
Posted by Oasisthetoo at 7:52 PM No comments: Links to this post
ရဟန်းတော်များ ဘာကြောင့် ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲ?
ရဟန်းတော်တွေ ကိုရင်လေးတွေ သီလရှင်လေးတွေ ဘာကြောင့်ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကိုအရှင်နာဂသိန်ထေရ်လောင်းလျာသူငယ်လေးက မေးလို့အရှင်ရောဟန ထေရ်က ဖြေကြားထားတဲ့ ဆံပင်မှာ ဗလိဗောဓ ကြောင့်ကြဖွယ်အပြစ် ၁၆-ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအပြစ် ၁၆-ပါးက ဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့
(၂)။ ပြေပြစ်ချောမွေ့အောင် ပြုပြင်ရခြင်း(ယခုခေတ်အလို ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်း ကောက်ခြင်း)။
(၇)။ခေါင်းလျှော်ရန် ကင်ပွန်းသီး ဆီ စသည်တို့ဖြင့် (ထုံရ)နှဲရခြင်း။
(၁၄)။ထုံးပြီး ဦးသျှောင်ကို အခါအားလျှော်စွာပြန်ပြင်ရခြင်း။
(၁၆)ဆံပင်ကျွတ်ခဲ့သော် ပြတ်ခဲ့သော် စိုးရိမ်ရခြင်း။
ရဟန်းတော်များကိုရင်များသီလရှင်များဆံပင်များရှိနေပါကကြည်ညိုဖွယ်မဖြစ်သလိုထိုဆံပင်ကြောင့်အချိန်ပိုကာအချိန်များစွာပေးရကာပရိယတ္တိအလုပ်များကိုကောင်းစွာမလုပ်နိုင်သလိုပဋိပတ်ဆိုတဲ့ ဝိပဿနာအလုပ်များကိုလည်း အားလျော့စေပါတယ်။
ဒီအပြစ်တွေကြောင့် သာသနာကိုဝင်ရင် ခေါင်းရိတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအားလုံးကို သိစေအပ်ပါသည်။
တရားအသိဥာဏ်များ တိုးပွါးနိုင်ကြပါစေ...။ မျှဝေပါသည်။
Posted by Oasisthetoo at 7:09 PM No comments: Links to this post
လူတွေသေဆုံး ပြီးပြီးခြင်း ဘယ် အရာ ရှင်ပြီးကျန်သေးသလဲ?
(၁) နှလုံး က ဆယ်မိနစ် အထိ ရှင်တယ်။
(၂) ဦးနှောက် က မိနစ် နှစ်ဆယ် အထိ ရှင်တယ်။
(၃) မျက်လုံး က လေးနာရီ အထိ ရှင်တယ်။
(၄) အရေပြားက ငါးရက် အထိ ရှင်တယ်။
(၅) အရိုးက ရက်သုံးဆယ် အထိ ရှင်တယ်။
(((ကောင်းတဲ့ အကျင့်သီလ ကတော့ တမလွန် အထိ ရှင်တယ်)
Posted by Oasisthetoo at 12:15 AM No comments: Links to this post
သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်တွင် ထားရှိသည့်
ကမ္ဘာကျော် အမြင် ။
အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်က ဆရာတော်ကို အရှင်ဘုရား ဗုဒ္ဓဘာသာကို( Religion ) ဘာသာတရားလို့ဆိုနိုင်ပါသလားလို့ မေးပါတယ်။
ဆရာတော်က ‘‘ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ Religion မဟုတ်ဟု‘‘ ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
‘‘ Religion ကတော့ ကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူးလား‘‘
‘‘Religion ဆိုတဲ့ ဘာသာတရားမှာ ကျင့်စဉ်မပါဘူး။
ယုံကြည်ခြင်း၊ရှိခိုးခြင်း ၊ ဆုတောင်းချင်းတို့ပဲရှိပါတယ်။
ယုံကြည်မှုနှင့်ဆုတောင်မှုကိုပဓာန မထားပဲ အကျင့်ကိုသာ ပဓာနထားတဲ့ ဘာသာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။‘‘
ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဟိာ(Philosophy) လို့ဆိုရင် ကောရပါသလားလို့ ဒကာကထပ်မေးပါတယ်။
ဆရာတ်ာက ‘‘မရပါဘူ။ ဒီလိုတစ်ဘက်သက်လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။
ဖီလောဆိုဖီ ဆိုတာ အသိသက်သက်ပဲ ။ အကျင့်စရဏမပါဘူး။‘‘
‘‘ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ယုံကြည်မှုနဲ့ အသိဉာဏ်ပေါင်းစပ်ပြီး ကျင့်ရတဲ့တရားပါ‘‘
ယုံကြည်မှုနဲ့ အသိဉာဏ်ပေါင်းစပ်ပြီး ကျင့်တော့ မိမိနှလုံးသားထဲက ယုတ်ညံတဲ့ကိလေသာ တွေအကုန်ရှင်းသွားတယ်။ အဲဒီလိုရှင်းသွားတော့ ချမ်းသာသုခကို အမှန်တကယ်ရတာပါပဲ။‘‘
‘‘ မိမိရဲ့ယုတ်ညံမှုတွေကို မိမိကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်။ မိမိစိတ်ဓါတ်ရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားယူရတယ်။
အလွန်တန်ဖိုး ထက်မြတ်တဲ့ စိတ်၊စေတသိတ်တို့ကို အသုံချကျင့်ရတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ‘‘ ဟုဆရာတော်က မိန့်ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Oasisthetoo at 11:40 PM No comments: Links to this post
စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး ဖြေကြားသော ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ မေးခွန်းများ
တချိန်က သာသနာမှာ ရဟန္တာတစ်ဆူဟုကျော်ကြားတော်မူသော
ထွန်ထောင် ဆရာတော် ( လူ့ဘ၀တုံးက ထွန်ကိုထောင် နွားတွေကို ဘေးမဲ့ပေးပြီး ရဟန်းဘောင် ၀င်ရောက်ခဲ့လို့ ) စွန်းလွန်းဂူ ဆရာတော် ဦးက၀ိ ကို နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု က ဖူးမျှော်ရင်း မေး+ဖြေ ခဲ့တဲ့စကားဆိုတာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်က ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဤ စာအုပ်လေးကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုရသည့်အခါ ပညာရှင်နှစ်ဦး၏အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေတွေကို ဓမ္မမိတ်ဆွေများ လေ့လာ စေချင်ပါသဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။
မေး။ ။ လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင်၊ သေစေလို ရေအေးလောင်း ၊ ရှင်စေလို ရေနွေးလောင်း၊ ဟူသောအမေးကို ဖြေကြားတော်မူပါဘုရား၊
ဖြေ။ ။ လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင် ဆိုရာ၌ လူ့ပြည် နတ်ပြည် ဗြဟ္မာ့ပြည် ရယ်လို့ လောကဝေါဟာရ အားဖြင့် ရှိသော်လည်း ဘယ်ပြည်မှာများ ဘုရားပွင့်တယ်လို့ ကြားဖူးသတုံး လူ့ပြည်မှာလို့ ကြားဖူးပါတယ်ဘုရား အဲ ဂင်္ဂါ ၀ါဠု သဲစုမက ပွင့်တော်မူကြတဲ့ ဘုရားရှင်များမှာ သစ္စာလေးပါးနှင့်သာ ပွင့်ခြင်းကြောင့် လူတို့ပြည်တွင် သစ်လေးပင် ဟုဆိုသည်။ သေစေလို ရေအေးလောင်း ဆိုရာ၌ မဂ္ဂင်ရေ ကို ဆိုလိုသည်။ ရှင်စေလို ရေနွေးလောင်း ဆိုရာ၌ လောဘ ဒေါသ မောဟ ရေနွေးကို ဆိုလိုသည်။
မေး။ ။ မထိုင်ခင်က ခြေဆင်း၊ မလင်းခင်က ရောင်နီလာ၊ မချက်ခင်က ထမင်း၊ မကျက်ခင်က စားပြီးပြီ၊ မရက်ခင်က ပုဆိုး၊ မချုပ်ခင်က ၀တ်ပြီးပြီ၊ ၎င်းအမေးကို ဖြေတော်မူပါဘုရား၊
ဖြေ။ ။ အေး အဲဒါ ၀ိတက် လို့ခေါ်တယ်၊ ( ၀ိတက် ဆိုသည်မှာ ကြံစည် စဉ်းစား စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း ဖြစ်သည်၊ )
မေး။ ။အကြောင်းပြ ဘုရားတစ်ဆူ တစ်ဆူလျှင် သင်္ချေ နှစ်ဆယ် ကုဋေ ရှစ်ဆယ် ဗိုလ်ခြေတသိန်း ကျွတ်တမ်းဝင်သွားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်၊ ကျန်သော သတ္တ၀ါ ဟာ ရော့သလား မရော့ဘူးလားဘုရား၊
ဖြေ။ ။ ဒကာကြီးမေးတဲ့ အတိုင်းပဲ ရော့သလား ဆို ရော့တယ်၊ မရော့ဘူးလားဆိုရင်လဲ မလျော့ဘူးပေါ့၊
မေး။ ။ ရော့တာ ဘယ်လို မရော့တာ ဘယ်ပုံ ဆိုတာ သိလိုကြောင်းပါဘုရား
ဖြေ။ ။ ရော့တယ် ဆိုတာက ဥပမာ ဒကာကြီးအိမ်မှာ လူဆယ်ယောက် ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ ငါးယောက်ဆင်းသွားလျှင် ဆင်းသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ ရော့တာပေါ့၊ မရော့ဘူးဆိုတာက စိတ် စေတသိက် ရုပ် နိဗ္ဗာန် ဆိုတဲ့ ပရမတ္ထတရား မရော့ဘူး၊
မေး။ ။ ထင်းမရှိ တောသုံးထောင်၊ ရေမရှိ မြစ်လယ်ခေါင်၊ နှမ မရှိ ခြောက်ယောက်မောင် ၊ ကို ဖြေရှင်းတော် မူပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဘုရား အစရှိသော အရိယာ သူတော်ကောင်းတို့မှာ ကာမ ရူပ အရူပ ဆိုတဲ့ တောသုံးထောင်ထဲတွင် နေငြားသော်လည်း ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များမှာ လောင်စာ မရှိသောကြောင့် ထင်းမရှိ တောသုံးထောင် ဟုခေါ်သည်။ သတ္တ၀ါတို့၏ အာရုံအစဉ်မှာ မြစ်ရေအယဉ်ကဲ့ သို့ တသွင်သွင် စိးဆင်းနေငြားသော်လည်း ဘုရားစသော အရိယာသူတော်ကောင်းတို့မှာ အာရုံယိုစီးခြင်း မရှိတာကို ရေမရှိ မြစ်လယ်ခေါင် ဟု ခေါ်သည်၊ ဘုရားစသော အရိယာ သူတော်ကောင်းတိုမှာ မျက်စိ နား နှာခေါင်း ပါးစပ် ကာယ မန တံခါး ခြောက်ပေါက်ပင် ရှိသော်လည်း အာရုံလိုက်စားခြင်း မရှိတာကို နှမ မရှိ ခြောက်ယောက်မောင် လို့ ခေါ်သည်။
မေး။ ။ အရှင်ဘုရားတို့ ရဟန်းများမှာ မိမိကိုယ်ကို မိမိ သွေးထွက်အောင် လုပ်ရုံမျှနှင့် ဒုက္ကဋ်အာပတ် တပ်သလား မတပ်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ တပ်တယ်။
မေး။ ။ ဒါဖြင့်လျင် ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းတပါးဟာ မိမိ လည်ပင်းကို ဓါးနှင့်လှီးပြီး ဝေဒနာရှု့တာနဲ့ အရဟတ္တဖိုလ် ဆိုက်ပြီး ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ၄င်း ရဟန်းဟာ အာပတ်နှင့်တကွ မဂ်ဖိုလ်သို့ ဆိုက်ပါသလား ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဆိုက်တာ မှန်တယ်၊ ဒုက္ကဋ် အာပတ် မရှိလို့ ဆိုက်တာ၊
မေး။ ။ ဒါဖြင့် ဘုရား- အရှင်ဘုရားတို့မှာ သွေးထွက်ရုံမျှနှင့် အာပတ်သင့်တာ၊ အခုဟာက သွေးထွက်ရုံ မက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသေတောင် သတ်တာ ဒုက္ကဋ် အာပတ် မသင့်ပေဘူးလားဘုရား။
ဖြေ။ ။ မသင့်ဘူး ၊ ဥပမာ - ဒကာကြီး ပစ္စည်းမကိုင်နှင့် လို့ မတားမြစ်ခင် ဘုန်းကြီးက ကိုင်လိုက်ရင် ဘုန်းကြီးမှာ အပြစ်များ ရှိမလား ။ မရှိပါဘုရား။ တားမြစ်ပြီးမှ ကိုင်တော့ကော -- အပြစ်ရှိပါတယ် ဘုရား၊ အဲသည် ဥပမာ အတိုင်းပဲ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ အပြစ် မရှိတာလဲ မှန်တယ်၊ မဂ် ဖိုလ်ဆိုက်တာလဲ မှန်တယ်။ ကျေနပ် ၀မ်းမြောက်လှပါသည် ဘုရား။ ( ယင်း ရဟန်းကား လူ့ဘ၀ ကို ငြီးငွေ့လွန်းသောကြောင့် ထွက်ပေါက် ရှာသည့် အနေဖြင့် ရပြီးသား လောကီဈာန်ကို မလျောကျ ခင် မြစ်ကမ်းနားသွားကာ မိမိကိုယ်ကို ဆံရိတ်သော သင်ဓုန်း ဓားဖြင့် လည်ပင်းကို လှီးဖြတ်မည် ကြံရွယ်စဉ် ရဟန်းဘ၀ တလျောက်လုံး စောင့်စည်း ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သော မိမိ၏ စင်ကြယ် သန့်ရှင်းသော သီလကို တွေ့မြင်ရသောအခါ အဆင့်ဆင့် ၀မ်းသာမှု့ ပီတိသည် ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးသို့ ပျံ့ နှံ့ သော ဖရဏာ ပီတိအဖြစ်သို့ ရောက်လေ၏။ ၄င်း ပီတိ ဝေဒနာကို ခွာ၍ ၀ိပဿနာ ရှု့ မှတ်သောအခါ ကိလေသာကုန်ခြင်း အရဟတ္တမဂ် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ဆိုက်ခြင်း် အသက်ဇီဝိတိဒြေ ကုန်ခန်းခြင်းသည်လည်း တပြိုင်နက်ဖြစ်ကာ တခဏအတွင်း အလွန်လျင်မြန်ကာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခြင်းကိစ္စ ပြီးသွားသောကြောင့် သတ္တ၀ါတို့ တဘ၀မှ တဘ၀ သို့ ကူးပြောင်းတိုင်း ဖြစ်ရာ ဘုံဘ၀ကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းလေ့၇ှိသော မာနတ် သည်ပင် မျက်စိလည်သွား ဟူ ၏ ။ ထိုမာနတ်ကား ( ၃၁ ) ဘုံးအတွင်း ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ရောက်သွားလျင် သူ့ပိုင်နက်အတွင်း ဖြစ်သောကြောင့် ကျေနပ်နေလေ့ ရှိသတဲ့ ။မာနတ်ရှာဖွေနေကြောင်းသိသော ဘုရားရှင်က ဟယ် မာနတ် သင်က ငါ့ ဘုရားတပည့်ကို အထင်သေးသကိုး၊ သင် မကျေနပ်လို့ ၃၁ ဘုံအတွင်း ကြိုက်သလောက်ရှာ ဘယ်တော့မှ တွေ့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ငါ့သားတော် ဂေါဓိက ရဟန်းဟာ နိဗ္ဗာန် ၀င်သွားပြီ ဆိုတော့မှ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ သူ့နေရာ နတ်ပြည်ကို ပြန်သွားသတဲ့ ( စကားချပ်- ဂေါဓိကတ္ထေရ ၀တ္ထု ၊ ဓမ္မပဒ ၊ )
မေး။ ။ တခုလောက် လျောက်ပါရစေ၊ သုတ်မဟာဝါ ပါဠိတော် မဟာ ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်ထဲမှာ ဘုရား၏ ဓာတ်တော် ဝေခဏ်း တွေ့ပါတယ်၊ ၄င်းသုတ်ကိုပင် ဘုရားဟော လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဓါတ်တော်များကို ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုမီက ဝေခဲ့ ပါသလား၊ သို့တည်းမဟုတ် ဘယ်သူ ဝေခဲ့ သတုံး ဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဧ၀ံ မေ သုတံ ကို ဘယ်သူဟောသတုံး။ ကျေနပ်လှပါ၏ ဘုရား။
မေး။ ။ နိဗ္ဗာန် ၏ အကြောင်းကို အမိန့်ရှိတော်မူပါ ဘုရား။
ဖြေ။ ။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်း သိချင်သလား ၊ သိချင်လျှင် ဘင် စွန်း မြင်အောင် ကြည့်က သိလိမ့်မည်၊
မေး။ ။ ဘယ်လို ဘင်စွန်း ဘယ်လို မြင်အောင် ကြည့်ရမှာ တုံးဘုရား။
ဖြေ။ ။ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက်သည် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို သတိနှင့် သုံးသပ်လျှက် သမာဓိ အားကောင်းလာသော် စိတ် စေတသိက် ရုပ် ဆိုတဲ့ တရားသုံးပါးကို ပိုင်းပိုင်းခြားခြား မြင်သောအခါ ဒီဒုက္ခကြီးဟာဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ လို့ စိစစ်လိုက်တော့ လုပ်ပေးတတ်တဲ့ လောဘ ဆိုတဲ့ သမုဒယ ကိုမြင်တော့ မဂ်က အနုသယ ကို ပယ်သတ်လိုက်တာနှင့် ဥပါဒ် ဋ္ဌီ ဘင် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အကျိုး ပြတ်တာကို ဘင်စွန်း ဟု ခေါ်တယ်။ အဲဒီ ဘင်စွန်း ကို ပြောတာ။
မေး။ ။ မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိတော့ သိတယ် လို့ပြောတယ်၊ သိတယ် ဆိုတာ သူချည်းပဲ သိတာလား ၊ သို့မဟုတ် သူတကာ ( အခြားတရား ) နှင့် ရောစပ်မှ သိတာလား၊
ဖြေ။ ။ ရောစပ်မှ သိတယ်၊
မေး။ ။ ရောစပ်သူ ထည့်ပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဝေဒနာ သညာ ၀ိညာဏ် ထိုသုံးချက်စုမှ သိမှု့ ဖြစ်တယ်။
မေး ။ ။ စု ပေးသူများ ရှိရင် ထည့်ပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ထိုသုံးချက်ကို သင်္ခါရက မြေ ရေ လေ မီး ဓါတ်ကြီး လေးပါးကို တံခါးမှာ စုပေးတော့ သိခြင်း မှတ်ခြင်း ခံစားခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို သိမှု့ ဖြစ်တယ် ( သိတယ် ) လို့ ခေါ်တယ်။
မေး။ ။ တထောင့်ငါးရာတည်းဟူသော ကိလေသာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင် ဘယ်နေရာမှာ ကိန်းပါသတုံး ဘုရား။
ဖြေ။ ။ သိချင်သလား၊ သိချင်လျင် ဇာတိမြင်အောင်ကြည့် ၊ ဇာတိ ကိန်းတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်လို ဇာတိ ဘယ်လို မြင်အောင် ကြည့်ရမှာတုံး ဘုရား။
ဖြေ။ ။ မြေ ရေ လေ မီး ဓာတ်ကြီး လေးပါး ရှိတယ် မဟုတ်လား၊ ၎င်း ဓာတ်ကြီးလေးပါးကို သင်္ခါရက ပြုပြင်ပေးတော့ သိမှု့ မှတ်မှု့ ခံစားမှု့ ဖြစ်ပေါ်၍ လာတယ်။ အဲတာ ဇာတိပဲ။ အဲဒီ ဇာတိကို မြင်အောင်ကြည့်က သိလိမ့် မယ်။
မေး။ ။ ရဟန်းများ၌ သိအပ်သော တရားငါးပါးကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ( ၁ ) အလိုရှိခြင်း၊ ( ၂ ) ကျက်စားခြင်း၊ ( ၃ ) ထောက်တည်ခြင်း၊ ( ၄ ) နှလုံးသွင်းခြင်း၊ ( ၅ ) ပြီးဆုံးခြင်း၊ အလိုရှိတာက ဘာကို အလှိုရှိတာတုံး ဆိုလျင်သုခချမ်းသာကို အလိုရှိတယ်၊ ပညာ ကို ကျက်စားတယ်၊ သီလ သမာဓိ ပညာကို ထောက်တည်တယ်၊ ကြောင့်ကြမှု့ တောင့်တမှု့ ကင်းတာကို နှလုံးသွင်းတယ်၊ နိဗ္ဗာန်ကို ပြီးဆုံးတယ်၊ အဲဒါ ရဟန်းများ၌ သိအပ်သော တရားငါးပါးပဲ။ ။
စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ဦးနု အတွက် ပဌာန်းတရားတော်
တကာကြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ နေစဉ်အခါက မြင်းခြံ ဂူကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဦးက၀ိ ရှိတယ်လို့ မကြားဘူးလား၊ ကြားပါ၏ ဘုရား။ အဲဒါ ဟိတ်ခတ်တာ၊ ဟေတု ပစ္စယော လို့ ခေါ်တယ်၊ ၎င်းနောက် သွားအုံးမှ ပါလေ လို့ အာရုံက မဆန့်ဘူးလား။ ဆန့်ပါ၏ ဘုရား။ အဲဒီ အာရုံ ဆန့်တာကို အာရမ္မဏ ပစ္စယော လို့ ခေါ်တယ်။ နောက်တဖန် အိမ်မှာ ကျီးစားစား ခွေးစားစား ဘုန်းတော်ကြီး၏ ခြေရင်းသို့ မေ၇ာက်ရောက်အောင် သွားအုံးမှဘဲလို့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အာရုံက ဆွဲလာ၍ အခုဘုန်းကြီးခြေတော်ရင်းသို့ ရောက်လာတာဟာ ဒကာကြီး လာချင်လို့ လာတာ မဟုတ်ဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အာရုံက အဓိပတိတပ်၍ ဆွဲလာခြင်းကြောင့် အဓိပတိ ပစ္စယော လို့ ခေါ်တယ်၊ မှန်လှပါ၏ ဘုရား။ အဲဒါ ဘာကြောင့် လာရတာလဲ ဆိုလျင် ရှေးက ဘုန်းကြီးနှင့် တွေ့ခဲ့ရဖူးလို့ ခုတွေ့ချင်တယ်။ ခု တွေ့ချင်လို့ တွေ့ရပြန်တယ်၊ နောင်ကိုလဲ တွေ့ရလေအုံးမယ်။ ဒကာကြီး ၀က်သားများ စားဖူးသလား။ စားဖူးပါ၏ ဘုရား။ အဲ ရှေးက ၀က်သားကို စားခဲ့ ဖူးလို့ ခုစားချင်တယ်။ ခုစားချင်လို့ စားရပြန်တယ်၊ နောင်ကို လဲ စားရလေအုံးမယ်။ေ******ကော စားဖူးပါသလား။ မစားဖူးပါ ဘုရား။ အဲ ရှေးကေ****** မစားဘူးလို့ ခု မစားချင်ဘူး၊ ခု မစားချင်လို့ ခု မစားဘူး၊ နောင်ကိုလဲ စားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေးက ဒီ တရားမျိုးကို နာခဲ့ ရဖူးလို့ ခု နာချင်တယ်။ ခု နာချင်လို့ နာရပြန်တယ်၊ နောင်ကို လဲ နာရလေအုံးမယ်။
အနန္တရ၊ သမနန္တရ ၊ သဟဇာတ ၊ အညမည ပစ္စည်း ဆက်မသွားဘူးလား၊ သွားပါ၏ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီး၏ ခြေရင်းရောက်တော့ ဘုန်းကြီးက ရှေးဦးစွာ ဘုရားကန်တော့၊ မေတ္တာပို့ ၊ အမျှဝေ ၊ မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘုရားလှူု၊ နှာသီးဖျားမှာ စိတ်ကိုထား၊ လေတိုးထိတော့ သိလိမ့် မယ်။ သိတဲ့ အပေါ် သတိထားရမယ်။ ပြောတော့ နိဿယ ပစ္စယော၊ ဥပနိဿယ ပစ္စယောလို့ ခေါ်တယ်။ မှန်လှပါ ဘုရား။ အားထုတ်ဆဲ အခိုက်အတန့် မှာ မျက်စိကတော့ တောင်ကြည့် မြောက်ကြည့် ကြည့်သေးရဲ့လား။ မကြည့်ပါ ဘုရား။ နားကကော ဟိုထောင် သည်ထောင် ထောင်သေးရဲ့လား။ မထောင်ပါ ဘုရား။ နားခေါင်းကကော ဟိုရူ သည်ရူ ရူသေးရဲ့လား။ မရူပါ ဘုရား။ ပါးစပ်ကကော ဟိုစားချင် သည်စားချင် ရှိသေးရဲ့လား။ မရှိပါဘုရား။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကော ဟိုသွားချင် ဒီသွားချင် ရှိသေးရဲ့လား။ မရှိပါဘုရား။ အဲဒီတော့ စက္ခု သောတ ဃာန ဇိဝှါ ကာယ ဆိုတဲ့ ဣနြေ္ဒ ငါးပါး မလုံဘူးလား။ လုံပါ၏ ဘုရား။ အဲဒါ ဣန္ဒြိယ ပစ္စယော လို့ ခေါ်တယ်ကွဲ့ ။
မိမိ နှာသီးဖျားမှာ လေတိုးထိတာကို သတိနှင့် သုံးသပ်ပါများသော် ဈာန် သတ္တိ ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ကိလေသာတွေ လောင်ကျွမ်းသွားတာကို ဈာန်လို့ ခေါ်တယ်ကွဲ့၊ အဲဒါ ဈာန ပစ္စယော ပဲ။ မှန်လှပါ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီးက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ပူမှန်းသိတဲ့အခါ အေးမှန်းသိတဲ့ အခါမျိုး ကျတော့ ပူမှု့နှင့် သိမှတ်မှု့ ၊ အေးမှု့နှင့် သိမှတ်မှု့ တွေ ချုပ်သွားလိမ့်မယ်၊ အဲဒါ မဂ်ခရီး ရောက်ခြင်းကြောင့် မဂ္ဂ ပစ္စယော လို့ ခေါ်တယ်၊ မှန်လှပါဘုရား။ ၎င်းမဂ် ခရီးကို သွားပါများ၍ သမာဓိ အားကောင်းလာသော် ဖြစ်ခြင်း ချုပ်ခြင်းကို သိသော ဥာဏ်အမြင်ရင့်သန်လာခြင်းကြောင့် မရှိတာကိုလဲ ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်၊ ရှိတာကိုလဲ ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်၊ မရှိတာက ငါ့ခြေ ငါ့လက် ငါ့ခေါင်း ၊ ရှိတာက စိတ် စေတသိက် ရုပ် နိဗ္ဗာန် ပရမတ္ထတရားပဲ။ ကင်းတာကိုလဲ ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်၊ မကင်းတာကို လဲ ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်၊မကင်းတာက သင်္ခတ ဓာတ်၊ ကင်းတာက အသင်္ခတ ဓာတ် မဟုတ်လား၊ ဟုတ်ပါ၏ ဘုရား။ အဲဒါ အတ္ထိ ပစ္စယော ၊ နတ္ထိ ပစ္စယော၊ ၀ိဂတ ပစ္စယော၊ အ၀ိဂတ ပစ္စယော လို့ခေါ်တယ်၊
( မှတ်ချက် ) ။ ဤနေရာမှ စ၍ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု နှင့် စွန်းလွန်း ဆရာတော်တို့ ၀ိပဿနာအကြောင်း ၊ ၀ိနည်း အကြောင်း၊ အဘိဓမ္မာသဘော တရားများ ဆွေးနွေးခန်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်သွားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ယနေ့တိုင် မည်သည့်ဆေးဝါးအကူအညီမျှမပါမပုပ်မသိုးဘဲပကတိအတိုင်းရှိနေသည့်စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးကဝိရုပ်ကလာပ်တော် နှင့် ပတ်သက်၍ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူး ဧည့်သည်များ အထူးကြည်ညိုစိတ်ဝင်စားကြသကဲ့သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှဧည့်သည်များကလည်းဆရာတော်ကြီး၏မပုပ်မသိုးရုပ်ကလပ်တော်အားအထူးစိတ်ဝင်စား ကြောင်း စွန်းလွန်းဂူကျောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ဆရာတော်ကြီးကသက်တော်(၇၅)ဝါတော်(၂၈)မှာပျံလွန်တော်မူခဲ့တာပါ။လက်ရှိဒီမှာထားရှိပူဇော်တာကတော့ နှစ် (၆၀) ကျော်ပါပြီ။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လူတွေ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ကိုလာရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုကြသလိုပြည်တွင်းကခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြင်းခြံကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည် တွေကလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မပုပ်မသိုးတဲ့ရုပ်ကလာပ်တော်ကိုအံ့ဖွယ်တစ်ခုလိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်" ဟု စွန်းလွန်းကျောင်း တာဝန်ရှိသူ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသွားသည်။
ဆရာတော်ကြီး၏ရုပ်ကလာပ်တော်အား လာရောက်လေ့လာသည့် UK နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဘင်းဒရစ်အား Hot News သတင်းထောက်က ဆရာတော်ကြီး ရုပ်ကလာပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းကြည့်ရာ "ထူးခြားတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ မြန်မာပြည်မှာက သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတော်စင်၊ သူတော်မြတ်တွေရဲ့ ဆေးအကူအညီမပါတဲ့၊ မပုပ်ပွတဲ့ ရုပ်ကလာပ်တွေ အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မှတ်တမ်းယူပြီး ကမ္ဘာမှာ ပြန် Share မှာပါ" ဟု ပြောကြားသွားသည်။ စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအား အဘဦးသန့်၊ အမိ ဒေါ်တုတ်တို့မှ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၂၃၉ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း (၂) ရက်၊တနင်္လာနေ့နံနက် (၃) နာရီတွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ပြီးနောက် ၁၂၈၂ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁၃) ရက်၌ ဒုတိယတရားထူး ၁၂၈၂ ခုနှစ် သတင်းကျွတ်လပြည့် (၁၃) ရက်၌ စတုတ္ထတရားထူးများကို ရရှိတော်မူခဲ့ပြီး ၁၃၁၄ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၉) ရက် စနေနေ့ ညနေ (၄:၄၅) အချိန်၌ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူခဲ့သည်။
ထိုခေတ် ထိုအခါက ရဟန္တာ တစ်ပါး ဟု ထင်ရှား သတင်းကြီးနေသော ဆရာတော်အား ဘ၀တစ်လျောက်လုံး ရောက်လေရာနေရာ၌ တွေ့ရာ ဆရာတော်ကြီးများ ၊ သံဃာတော်များက ၀ိပဿနာအကြောင်း သာသနာရေးအကြောင်းကို စာမတတ်သော ဆရာတော်ကြီး၏ အဖြေစကားများက ကျမ်းဂန် အထောက်အထားများနှင့် ညီ၊ မညီ၊ကို အချိန်ရလျင် ရသလို၊ စစ်ဆေး ၊ မေးမြန်း စမ်းသပ်လေ့ရှိ ကြရာ ဆရာတော်ကြီး၏ အံသြဖွယ်ရာ အဖြေစကားများသည် ကျမ်းဂန်များနှင့် အားလုံးကိုက်ညီနေသည်ကို တွေ့ကြရကား နောင်လာနောက်သားတို့ အတုယူဖွယ် ကြည်ညိဖွယ် ဖြစ်စေရန် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ ချမ်းသာပါစေ၊အေးငြိမ်းပါစေ၊ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ..လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
Posted by Oasisthetoo at 11:35 PM No comments: Links to this post
အသက်ရှည်၊ကျန်းမာပြီး အိမ်မက်လှလှတွေနှင့်အတူ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်နိုင်ကြပါစေ..
Posted by Oasisthetoo at 3:45 AM No comments: Links to this post
အံ့ဖွယ် ပုဂံရဲ့ အလှ
Posted by Oasisthetoo at 2:04 AM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 2:01 AM No comments: Links to this post
သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးတော်မူရာ ဂန္ဓကုဋိ
Posted by Oasisthetoo at 1:57 AM No comments: Links to this post
မိဂဒါဝုန်ရှိ အနတ္တလက္ခဏသုတ် ဟောတော်မူရာ ဓမ္မေခစေတီတော်။
Posted by Oasisthetoo at 1:55 AM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 1:53 AM No comments: Links to this post
အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ တည်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးရေတံခွန်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Niagara ရေတံခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတံခွန်တွေဖက်ခြမ်းတော်တော်များများကိုတော့ အမေရိကန်ဘက်က ပိုင်ပြီး ရေတံခွန်ရဲ့ ရှုခင်းအလှနဲ့ ကြည့်စရာနေရာဒေသတွေကိုတော့ ကနေဒါဘက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်
Posted by Oasisthetoo at 1:43 AM No comments: Links to this post
It’s been burning ever since
Posted by Oasisthetoo at 1:37 AM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 7:32 PM No comments: Links to this post
ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ရဲ့ နံနက် ၄ နာရီ ပါ။ တော်တော်လေးကောင်းလို့ ဘာသာပြန်ပေး လိုက်တာပါ။ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတွေရဲ့နော
က်ကွယ်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ကြိူးစားအားထုတ်ခဲ့ရတာရှိသလဲဆိုတာကို ဒါလေးကသက်သေ ပြနေပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကဆရာတွေ ပြောပြလေ့ရှိတာကတော့ သင်ဘ၀မှာစိတ်တိုင်းကျဖို့နဲ့ ကောင်းတဲ့ဝေဖန်မှုရချင်ရင်တော့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နေတဲ့အချိန်နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့ဖို့အချိန်မရှိဘူး။
ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးကျောင်းတစ်ကျောင်းအနေနဲ့ ဟားဗတ်က နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးမွေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲ့ထဲမှာ နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ၃၃ဦး၊ အမေရိကန်သမ္မတ ၇ဦး နဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ထူးချွန်ထက်မြတ်သူတွေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဟားဗတ်ဟာ သူတို့ရဲ. မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်နေတာလဲ။ ဟားဗတ်ကျောင်းသားတွေဟာ ဘယ်လို စိတ်ဓာတ် နဲ.တွေးခေါ်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ ကြတာလဲ။ ဒီအဖြေကိုလူပေါင်းများစွာ လိုက်ရှာနေကြတယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံမှာ ရေးထားတဲ့ ဆုံးမစာလေးကတော့ အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ တိုတောင်းတဲ့ စာသားလေးတွေဟာ လေးနက်တဲ့တွေးခေါ်မှု တွေပေးပြီး စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ. စာကြည့်တိုက်နံရံပေါ်က အချက်၂၀ ဆုံးမစာကတော့…
၂၀) အကျပ်အတည်းအခက်အခဲမရှိလျှင် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်ပါ
Posted by Oasisthetoo at 7:46 PM No comments: Links to this post
Labels: ကဗျာ, ဗဟုသုတ
ဒီဃာယုနတ်။ဖြစ်လတ်ပစ္စန်။မိစ္ဆာ ဥာဏ်ရှိ။ဥာဏ်မရှိသား။ဥာဏ်ရှိ ငြားလည်း။ဘုရားမဖြစ်ကျန်းဂမ် လှစ်သည်။ရပ်ပြစ်ရှစ်းပါးသရုပ် တည်း။
08 APRIL 2013 | BY GOOD HEALTH
ပုံမှန် စားတာကြောင့် ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျ စေကြောင်း လေ့လာမှု တွေအရ သိရပါတယ်။ ကြက်သွန် ဖြူက ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို နှေးကွေးစေကြောင်း လေ့လာမှုအ များအပြားက ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ ကြက် သွန်ဖြူကို များများ စားတဲ့ အမျိုးသားတွေ က ဆီးကျိတ် ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀ ရာ ခိုင်နှုန်း လျော့ကျ နေကြောင်း သိရပါ တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို အစိမ်းလိုက်စား တာက ကင်ဆာ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကောင်း ကျိုးကို ရရှိစေပါတယ်။
Posted by Oasisthetoo at 7:29 PM No comments: Links to this post
ညဟာ အိမ်ပျောက်သူတွေအတွက် ရက်စက်လွန်းတယ်
အိမ်ဟာ အိမ်မက်သူတွေအတွက် လှပလွန်းတယ်
ငါတို့ဟာ တစ်နေ့ကောင်းနိုး တစ်နေ့ကောင်းနိုးနဲ့
ငါ အိမ်ကိုမက်တုန်း ဒေါသထွက်တုန်း
လက်ပန်းတောင်းရယ် မင်းကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်
သူုတို့ ငါတို့ နှလုံးတွေကို ငါတို့ရင်ဘတ်ကြီးကို ကော်ထုတ်သွားကြတယ်
ငါ.... မကလည်းတီး ကလည်းတီး ရေးတယ်
မီးကလေးမှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ရေးတယ်
ငါကတော့ ငါ့ကိုယ်ငါ အဟုတ်ပဲ
ငါလာခဲ့ပါ့မယ် မနက်ဖြန် မင်းဆီအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်
ခြင်္သေ့ရေမှာရော ခရိုနီတွေ သံခမောက်ချွတ်တွေ ဂေါက်ရိုက်ကြလား
သူမဟုတ်က ထုတ်လုိုက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးမယ်
ငါမျက်ရည်ကျနေပါလား... ဘာ့ကြောင့်လဲ ဘာအတွက်လဲ
ငါပျော် နေ ရ မယ့် အ စား ......။
Posted by Oasisthetoo at 3:19 AM No comments: Links to this post
နန်စံနှစ်..................................၁၃ နှစ် ( ၁၆ မှ ၂၉ )
ထိုစကားကို ပြောခဲ့သူမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီပင် ဖြစ်သည်။ အီဂတ်ပူရီပြည်နယ်၌ ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာ တရားတော်များကို ကမ္ဘာသို့ ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသော ဂုရုကြီးဦးဂိုအင်ကာ၏ အဘိုးတော်သူပင် ဖြစ်သည်။
အရောင်းအ၀ယ် ကုန်သည် အလုပ်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ခြေဆန့်ခဲ့ဖူးသော ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် သူ အမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သော မန္တလေးရတနာပုံ နေပြည့်တော်တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့သည်။
ထိုချိန်က အထက် မြန်မာပြည်သည် မြန်မာဘုရင်၏ လက်ထဲမှာသာ ရှိသေး သောကြောင့် သူခိုး လူလိမ်ဆိုသည်မှာ ချိုနှင့်လားဟု မေးရလောက်အောင် မြန်မာတိုင်း စာရိတ္တသတ္တိ အပြည့်ရှိနေချိန် ဖြစ်ပါ၏။
ထိုသူသည် ကုန်သည်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ရာ အထက်မြန်မာပြည်ရှိ မြို့ကြီး အသီးသီးသို့ သွားရောက် ရောင်းဝယ်ရသည်။ ပစ္စည်းပစ္စယများ သယ်ရန် အတွက် မြင်းငါးကောင်နှင့် အတူ မြန်မာ မြင်းစီးသမား ငါးယောက်ကိုလည်း တစ်ခါတည်း အသွားအပြန် ငှားလာခဲ့ရသည်။
အရောင်းအ၀ယ် ပစ္စည်းများသောကြောင့် ရက်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ၏ ပိုက်ဆံထည့်သည့် အိတ်ကြီးမှာလည်း ငွေဒင်္ဂါးများနှင့် ပြည့်ပြည့် လာခဲ့သည်။ နောက်ထပ် မြို့သုံးမြို့ ငါးရက် ခရီးနှင်ပြီးလျှင် သည်တစ်ခေါက် အရောင်းအ၀ယ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီသည် အိမ်ပြန်ရတော့မည်ကို တွေးပြီး ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နေလေသည်။
နေ၀င်စပြုနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် လှမ်းမြင်နေရသော ဇရပ်တစ်ခုပေါ်တွင် တစ်ညအိပ်ရန် မြင်းသမားများကို အချက်ပြလိုက်သည်။
ရှေးခေတ်က ဇရပ်ဆိုသည်မှာ ညအိပ်ညနေ ခရီးသည်များအတွက် လမ်းဆုံ လမ်းခွတွင် ဆောက်ထားသော ဇရပ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။ အမိုးနှင့်အခင်းကို အကောင်းဆုံး လုပ်ထားသောလည်း အကာ မရှိသောကြောင့် အရပ် လေးမျက်နှာမှ ခရီးသွားများ တံခါးမရှိ။ ဓားမရှိ လွတ်လပ်ချမ်းသာစွာ တည်းခိုနိုင်သည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သည်ဟု ယူဆရသည်။
တတ်နိုင်သော ဇရပ်အလှူရှင် အချို့သည် ခရီးသွားများအတွက် ဆန် ဆီ စသော စားသောက်ဖွယ်ရာ များကိုပင် ထားပေးကြောင်း သိရသည်။
ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီး နေလည်း မရှိတော့ပြီဖြစ်၍ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီတို့ ထိုဇရပ်မှာပင် ညအိပ်လိုက်ကြသည်။ နောင်တစ်နေ့ မိုးမလင်မီ မနက်စောစော ခရီးဆက်ကြရန် မြင်းသမားတို့ကို ဆော်သြ ထားလိုက်သည်။ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည့် ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီးကို မေ့ကျန်နေခဲ့မှာ စိုးသောကြောင့် ခေါင်းအုံး အိပ်လိုက်သည်။
မနက် လေးနာရီလောက်ထပြီး မြန်မြန်ထက်ထက် ပြင်ဆင်ကာ ရှေ့ခရီးကို ဆက်လာ ခဲ့ကြသည်။ ခြောက်နာရီခန့် ခရီးပေါက်ပြီးသောအခါမှ ခေါင်းအုံး အိပ်ခဲ့သည့် ငွေအိတ်ကြီး ပါမလာမှန်း ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ သိသွားသည်။
ပြင်းထန်သော စိုးရိမ်သောက စိတ်ကြောင့် နှလုံးသားမှာ တဒိန်းဒိန်းခုန်လာပြီး အမောဆို့သလိုပင် ဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် -
“ကျွန်တော့ ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီး ညအိပ်ခဲ့တဲ့ ဇရပ်ပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် နောက်လှည့်ပြန် ကြရမယ်” ဟု ပြောလိုက်သော်လည်း မြန်မာလူမျိုး မြင်းသမား ငါးယောက်လုံး တစ်ယောက်မှ တအံ့တသြ တထိတ်တလန့် ဖြစ်မသွားကြ။ သွားယူပေးမည့် အမူအရာလည်း မပြကြသဖြင့် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ မနေနိုင်တော့ -
“ကဲ. . . မြန်မြန်သွားယူဘို့ ပြင်ကြလေ။ ဘာလို့အေးတိ အေးစက် ဖြစ်နေကြ တာတုန်း” ဟု ပြောလိုက်သော အခါတွင်မှ
“မိတ်ဆွေကြီး ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ ကိုယ့်ခရီးကိုသာ ပြီးဆုံးအောင် ဆက်သွားပါ။ အပြန်ကျမှ ငွေအိတ်ကိုဝင်ယူပါ။ မိတ်ဆွေကြီးငွေအိတ် ဘယ်မှ ထွက်မပြေး ပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မယူပါဘူး။” ဟု ပြောလိုက်သဖြင့် ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ တစ်ယောက် ဒေါသထွက်သွားသည်။ “လွယ်ရင် သူကြွယ်တောင်မနေဘူး” ဟူသော စကားရှိနေရာ အဆင်သင့် တွေ့ရသော ငွေဒင်္ဂါးအိတ်ကြီးကို ဘယ်လို လူသည် မယူဘဲ နေနိုင်ပါအံ့နည်း။ ဘယ်သူမှ မယူဘူး ဟု တာဝန်ခံနိုင် လောက်အောင် သူတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဘယ်လောက်များ စာရိတ္တ ကောင်းနေကြလို့ နည်းဟု တွေးနေမိသည်။
“အေးလေ . .. ငါတို့ ထွက်လာကြတာလဲ ခြောက်နာရီ ကျော်သွားပြီးဆိုတော့ ဒီငွေအိတ်ကြီးကို ခရီးသွား တစ်ယောက်ယောက်ကရပြီး ယူသွားရောပေါ့။ ငါသွားနေလည်း ပင်ပန်းတာ အဖတ်တင်မှာပ”ဲ ဟု စိတ်ပျက်စွာနှင့် ဆက်ကာ တွေးပြီး ရှေ့မှာရှိသည့် မြို့ဈေးများသို့သာ ဆက်သွားလိုက် ကြသည်။
ငါးရက်ခန့်ရှိမှ ပြန်လာကြသောအခါ ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီ ထားခဲ့သော ငွေဒင်္ဂါးကြီမှာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ခဲ့စဉ်က အတိုင်းပင် လက်ရာမပျက် ပြန်တွေ့ရသည်။ ရေတွေက်ကြည့်သော အခါတွင်လည်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မလျော့။
♠ ထို့ကြောင့်လည်း ဘဆေဆ်လာလ်ဂျီက "ကမ္ဘာ့ဝိပဿနာ တရားပြဆရာကြီး ဖြစ်လာမည့် ဦးဂိုအင်ကာ အလောင်းအလျာ သူ့မြေးလေး"ကို -ငါ့မြေးရေ၊ အဘိုးတို့ ဒီမြန်မာပြည်မှာ နေခွင့်ရတာ သိပ်ကံကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ သူခိုးမရှိတဲ့ နိုင်ငံဆိုလို့ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ♠
နောက်တစ်ခုက မန္တလေး ရတနာပုံ ဈေးချိုတော်ကြီး လမ်းအလယ်မှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အဖိုးတန် စိန်နားကပ်တစ်ဖက် ပြုတ်ကျ ကျန်နေ ခဲ့တယ်။ ဈေးလယ်ဆိုတော့ ဈေးရောင်းသည်၊ ဈေးဝယ်သည် တစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်တော့ တွေ့မှာပဲ။ သို့သော် တစ်ယောက်မှ ကောက်မယူကြဘူး။ အလွယ်တကူ တွေ့ရတဲ့ အဖိုးတန် ပစ္စည်းကိုတောင် ကောက်မယူတဲ့ မြန်မာ လူမျိုးတွေဟာ သူတစ်ပါးအိမ်က ပစ္စည်း မသိအောင်ယူဖို့ ဆိုတာကတော့ ပိုပြီး ဝေးသေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ဈေးချိုသာ ပိတ်သွားတယ် စိန်နားကပ်ကြီးကတော့ လမ်းပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းပါပဲ။
နောက်တစ်နေ့မနက် ဈေးချိုဖွင့်ခါနီးမှာ အလုပ်သမလေး တစ်ယောက် စိန်နား ကပ်ကြီးကို တွေ့သွားတယ်။ “ဥစ္စာဆင်းရဲသော်လည်း စာရိတ္တ မဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကို မြင်ဖူးချင်ရင်” မြန်မာပြည်ကို လာခဲ့ပါလို့ ပြောရတော့မှာပဲ။ အလုပ် သမလေးဟာ စိန်နားကပ်ကို ကောက်ယူ လိုက်တယ်။ ယူဖို့မဟုတ်ဘူး။ စိန်နား ကပ်အောက်က ဖုန်တွေ အမှိုက်သရိုက်တွေ လှဲပစ်ဖို့အတွက်ပါ။ လှဲကျင်းပြီး တဲ့အခါ တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲ အတိအကျ ပြန်ထားလိုက်တယ်။ ပိုင်ရှင်က သူကျ ပျောက်တဲ့နေရာ ပြန်လာရှာရင် မြန်မြန်တွေ့ပါစေဆိုတဲ့ စေတနာပေါ့။
နောက်ဆုံး ဈေးရုံးတာဝန်ခံ ကိုယ်တိုင်မြို့ထဲ “မောင်းထု ပိုင်ရှင်ရှာပြီး ပေးလိုက်ရတယ်” ဟု ပြောခဲ့ဘူးသည်။
ကဲ စဉ်းစားကြည့်ကြ ပေတော့။ အရင်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ယခုမြန်မာနိုင်ငံ ဘယ်လောက် ကွာခြားသွားပြီလဲ။
♠ ဒါကို ကြည့်ပြီး စိတ်မပျက်ကြပါနဲ့။ “ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ” ဆိုသလို မိမိကိုယ် ကိုသာ ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင် (စာရိတ္တပိုင်းသာ) တာဝန်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံမှ မဟုတ် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဘယ်လောက်ငြိမ်းချမ်းမလဲ။ ♠
( မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)ဆရာတော် )
[အညွှန်း – မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)ဆရာတော် သီလအစွမ်း အံ့မခန်းစာအုပ်၊ မြန်မာတို့၏အသက်။]
Posted by Oasisthetoo at 11:47 PM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 11:37 PM No comments: Links to this post
ဆရာတော်ဘုရားက ၃၂-ကောဋ္ဌာသ ကမ္မဋ္ဌာန်းမှ ရောဂါနှင့်ဆိုင်ရာ ပဉ္စကကို တနေ့သုံးကြိမ် နံနက် တနာရီ၊ နေ့ တနာရီ၊ ည တနာရီ ပထမငါးရက် အသွား (အနုလုံ)၊ ဒုတိယ ငါးရက် အပြန် (ပဋိလုံ)၊ တတိယ ငါးရက် အသွားအပြန် (အနုလုံ ပဋိလုံ) ရွတ်ပြီး တရားအားထုတ်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရား အမေရိကန်မှ ပြန်မကြွမီပင် ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည် ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး ကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်လာကာ ရောဂါမှပျောက်ကင်းပြီး သေတွင်းမှ လွတ်ခဲ့ကြောင်း လျှောက်ထားပါသည်
Posted by Oasisthetoo at 8:08 AM No comments: Links to this post
ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သေသည်အထိ သာသနာပြုနေပုံ . . .
Posted by Oasisthetoo at 7:54 AM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံး သူဋ္ဌေးကြီး Warren Bu...
2013 သင်္ကြန် ပြီး နှစ်ဆန် တ...
ရဟန်းတော်များ ဘာကြောင့် ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲ? ရဟန်...
လူတွေသေဆုံး ပြီးပြီးခြင်း ဘယ် အရာ ရှင်ပြီးကျန်သေ...
သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်တွင် ထ...
စွန်းလွန်းဆရာတော်ကြီး ဖြေကြားသော ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု...
အတူတူတွဲ မအိပ်သင့်တဲ့အရာ - (၅)မျိုး ... ကျန်းမ...
အိုင်စလန်ကျွန်းစုနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ သဘာဝနေရာ...
သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတ၀န်ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ မြတ်...
မိဂဒါဝုန်ရှိ အနတ္တလက္ခဏသုတ် ဟေ...
အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ တည်ရှိတဲ့ ကမ...
Derweze – the Door to Hell Location: Turkmenist...
Ssa Ra --အောင်မြင်ကြောင်း) လုံ့လမထူ၊ဥာဏ်မကူဘဲ၊အ...
ဒီဓာတ်ပုံဟာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ရဲ့ နံနက် ၄...
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး ဘုရားဖြစ်ကာ။ပါယ်သုံးရွာနှင့်။ ...
အမျိုးသားတို့ ကြက်သွန်ဖြူစားသင့်သော အချက်သုံးရပ် ...
အိမ်ပြန်လမ်း ညဟာ အိမ်ပျောက်သူတွေအတွက် ရက်စက်လွန်...
လူအမည် ............သိဒ္ဓတ္တ ဘုရားဘွဲ့.................
ကမ္ဘာတွင် သူခိုးမရှိခဲ့သော နိုင်ငံ -------------...
sa Ra ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရား။ ...
"မရောင်းကောင်းသော ကုန်စည်မျိုး (၅) ပါး" •••••••••...
အံ့ချီးဖွယ် တောင်ပုလု ဆရာတော်ကြီး တောင်ပုလုဆရာ...
" . . . သာသနာ့ အာဇာနည် . . . " ==============...